MIBVUNZO - gomymobi.com
109 mitauro yakatsigirwa
Tiri kuedza kukubatsira mukunzwisisa mhinduro dzedu nekukurumidza
Kunyangwe isu tichitenda kuti iwe unofanirwa kuedza kwakanaka mukushandisa edu akanakisa mhinduro, asi dzimwe nguva kana iwe usingakwanise kunzwisisa chero chinhu, ndokumbira utarise nemibvunzo yedu inowanzo bvunzwa pazasi; uye rangarira isu tinogara tiri pano kuzokubatsira.
Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo?
Mibvunzo yako yakapindurwa pano
Ini ndinogona kuve neyakaganhurirwa bandwidth emawebhusaiti angu?
Chokwadi! Isu tinovimbisa iyi nyaya.
Ndinogona here kushandisa SSL netsika domain?
Aihwa! Parizvino hatitsigire SSL asi tichaita munguva pfupi.
Ehe! Ingotenga yako wega SSL setifiketi wozoshandisa kune yako domaini domain.
Ndinogona here kuva nemapeji asingagumi ewebhusaiti?
Ehe! Yedu chikuva chakagadzirirwa kukubvumidza iwe kuti ugadzire risingagumi mapeji ewebhu, chete gadzira sezvaunoda.
Ndinogona here kuwedzera zvinhu zvitsva kumapeji ewebhu?
Ndine urombo asi HERE! Yedu chikuva chinangwa ndechekubatsira vanhu kugadzira webhusaiti webhusaiti nekukurumidza neyavanofarira akavakirwa-mukati mawebhusaiti madingindira, ivo vanongoda chete kutora imwe yematimu vobva vatanga kuvaka yekugadzira webhusaiti; havazodi kufunga nezvenzira yekuronga zvinhu kuti mapeji acho ave akanaka, inyonganiso kana vasina nguva yakawanda.
Ehe! Iye zvino unogona kugadzira webhusaiti kubva pakutanga pamwe neyedu ine simba Element Builder.
Ini ndinogona kurodha pasi yakazara yakagadzirwa mawebhusaiti?
Ehe! Kunze kwekudhinda mawebhusaiti akagadzirwa senzvimbo domains / sub-domains, kana kurodha pasi kuburikidza neFTP, isu zvakare tinokutsigira iwe mukutora zvakakwana mawebhusaiti akagadzirwa.
Ndinogona here kuita yakasarudzika theme yewebhusaiti?
Chaizvoizvo, mutarisiri wedu ndihungu! Iwe unozofanirwa kuisa yako yakasarudzika theme, wozoisa seyakavanzika kuti ushandise kune ako mawebhusaiti chete.
Ungachinja sei Saiti Peji Chinyorwa?
Saiti Peji Peji Chinyorwa chinogona kushandurwa kuburikidza nemenyu Peji Zvirongwa zvesaiti yega yega mune Editing Mode
Nzira yekunongedza yangu dhatabhesi domain kune yakasikwa saiti?
Iwe unogona chete kunongedza tsika dhatabhesi muEditing Mode, mushure mekupinda yako yakasarudzika domain, iwe unofanirwa kuenda kune domain registrar wobva wagadzira iyo CNAME rekodhi & kunongedzera kudomain yedu www.gomymobi.com
Zvinoita here kuwedzera blog kuzvitoro nemawebhusaiti?
Kwete, mhinduro iyi haizogadziriswe munguva pfupi iri kutevera. Ndokumbirawo ushandise yekunze blogging system senge Medium wobva wawedzera blog link mune yako webhusaiti kana chitoro.
Pasina madomeni, ndinogona here kuva nebhizinesi webhusaiti kana chitoro?
Ehe! Izvo zviri nyore, iwe unongoda chete kushandisa edu madiki-maseru kune ako mabhizinesi mawebhusaiti uye zvitoro. Paunenge uchinge watove netsika domains, uye iwe ukavagovanisa iwo kune ako mawebhusaiti & zvitoro, ipapo zvese zvinoshanda nemazvo pasina kukuvadza kana kurasikirwa.
Ndinogona here KUSHURE FREE online chitoro nekusingaperi
Chokwadi! Tinokupa maturusi uye mhinduro dzekutengesa zvigadzirwa zvako zvekusika pasirese MAHARA muhupenyu. Asi nekuda kwekuganhurira nezve zviwanikwa, unogona kungova nezvigadzirwa gumi zvine maakaundi emahara.
Ini ndinogona kutengesa chimwe chinhu pawebhusaiti yangu?
Ehe! Mushure mekugadzira webhusaiti, iwe unongofanirwa kuvhurira chitoro uye wotanga kutengesa chero chinhu chauinacho.
Zvigadzirwa hazviratidzwe sekuraira mhando?
Iwe unofanirwa kuisa index yekuraira yezvigadzirwa muChigadzirwa Zvirongwa kutanga.
Ini ndinobatanidza sei dura rangu kuchitoro zvakananga?
Shop inoshanda se sub folda yedomeini, saka hazvigoneke kubatanidza dura kuti utenge zvakananga.
Ndingaite sei kuti ndigadzirise huwandu hwezvinhu mu Checkout peji?
Iwe unogona chete kushandura huwandu pa peji yengoro, iyo peji rekutarisa ndipo pekuisa maodha chete.
Ndingaite sei kuteedzera maodha angu akaiswa?
Mushure mekuisa iwo maodha zvinobudirira, iwe uchaendeswa kune iro reodha peji kuti ubhadhare & kuteedzera ichangobva kugadzirwa odha, iwe unowanawo iyi link mune email inotumirwa kune yako email ma adderss.
Ungachinja sei / kugadzirisa vhidhiyo yekubatanidza mune saiti madingindira?
Kune akakosha zvinhu izvo zvaisakwanisa kuchinja kuburikidza nevapepeti kana kodhi kodhi, iwe unofanirwa kugadzira munda mune theme-setings.php yewebhu saiti theme wobva washandisa PHP kugadzirisa maitiro akachinja.
Inozivisa ini ini ndoda kukwidziridza hurongwa hwangu?
Ndine urombo neizvi, asi zvimwe zvinhu nemhinduro ndezvenhengo dzakabhadharwa, ndapota simudza chirongwa chako chekushandisa maturusi aya. Zvirongwa zvedu zvakachipa kwazvo, ingotibata nesu kuti uwane rumwe ruzivo.
Kana iwe uri kushandisa demo account, ipapo akawanda akakosha maficha akaremara, ndapota edza nemaakaundi chaiwo, zviri zvachose MAHARA kunyoresa.
Iyi meseji inoita kunge yekuzivisa kuti account yako yapera, ndokumbira uvandudze kuti urambe uchishandisa.
Iyi meseji inoita senge yekuzivisa kuti haugone kudzikisira account yako kudzikisa zvirongwa, nekuti chikuva hachikwanise kusarudza kuti ndeapi masosi / zvitoro zvadzime. Saka iwe unogona chete kumutsidzira yako yazvino chirongwa kana kusimudzira kune epamusoro marongero.
Ini ndinogona kugadzira akasiyana mapurani esiti uye chitoro?
Ndine urombo neizvi, asi hapana hurongwa hwakakamurwa hwesaiti kana chitoro, ronga chete nekubatanidzwa kwesaiti & chitoro chakatsigirwa, unogona kungovhura kana kudzima mhinduro dzechitoro uye nekumisikidza saiti & zviwanikwa zvezvitoro.
Tiri pano kuzokubatsira iwe kuvaka ako mabhizinesi mawebhusaiti nekukurumidza, nyore & zvinobudirira; zvakare inokupa iwe yakanakisa mhinduro yekutengesa yako ekugadzira zvigadzirwa kune nyika nekomisheni yemahara zvachose, iwe unowana zvese purofiti.
Bhurawuza madingindira ewebhusaiti
Isu tinoshandisa akasiyana marudzi ekuki kukwirisa ruzivo rwako pawebhusaiti yedu. Isu tinoshandisa makuki kuvandudza ruzivo rwevashandisi, uye kuongorora webhusaiti traffic. Nezvikonzero izvi, isu tinogona kugovera yako saiti yekushandisa dhata needu analytics vatinoshanda navo. Unogona kubvumidza kushandiswa kwetekinoroji dzakadai nekuvhara ichi chiziviso, nekudyidzana nechero chinongedzo kana bhatani riri kunze kwechiziviso ichi kana nekuenderera uchitsvaga neimwe nzira.